भर्ना अभियान कर्मकाण्डी, हजारौँ बालबालिका विद्यालय बाहिर(भिडियो सहित) - TV Annapurna
May 20, 2018 May 28, 2018 Annapurna TV
विनोद देवकोटा, टिभी अन्नपूर्ण काठमाडौं ।
प्राथमिक तहमा विद्यालयबाहिर रहेका ८८ हजार बालबालिकालाई लक्षित गरी सुरु गरिएको यो वर्षको भर्ना नारामा नै सीमित भएको छ। सरकारले तामझामका साथ सुरु गरेको अभियानमा ५० प्रतिशत बालबालिका पनि विद्यालयको सम्पर्कमा नआएको एक अध्ययनले देखाएको छ।सरकारले एक महिनादेखि बडो तामझामका साथ भर्ना अभियानको प्रचार गरेको थियो। अभियानमा प्रधानमन्त्री र सबै मन्त्री, प्रदेश, स्थानीय तह, मुख्यसचिव, सचिव, विभिन्न निकायका उच्च अधिकारीहरूको समेत सक्रिय सहभागिता रहेको थियो।यति धेरै तामझामसहित व्यापक प्रचार गरे पनि विद्यालयबाहिर रहेका करिब ३४ हजार ३ सय बालबालिका मात्र विद्यालयमा भर्ना भएका छन्। प्राथमिक तहका अझै ५४ हजार बालबालिका विद्यालयबाहिर नै रहेको सरकारी आँकडाले नै देखाएको छ।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुगुको रारा महोत्सवमा पुगेर दुई विद्यार्थी भर्ना गरी अभियान सुरु गरेका थिए ।
भर्ना अभियानले नछोएका बालबालिका
काठमाडौँको बालाजु औद्धोगिक क्षेत्र अगाडिको सडक छेउका बालबालिकालाई भर्ना अभियानको हावाले छुँदै छोएनछ । सडक छेउमै दिनभरि ढुङ्गासँग लड्दै सिलौटो बनाएर गुजारा चलाउने परिवारका बालबालिका दिनभरि सडक छेउको फोहोरमै खेलेर बिताउँछन् ।
करिब ५० भन्दा बढीको सङ्ख्यामा रहेका उनीहरू चाहनाले स्कुल जान छोडेका होइनन् । बुटवल घर भई सडक छेउँमा आमा बाबुसँग बस्दै आएका निखिल कुश्वारी पनि विद्यालय जाने इच्छा हुँदा हुँदै पनि जान नपाएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, हामी ४ भाइ बहिनी छौ, पढ्न मन त लाग्छ नि, तर बा आमाले सकिँदैन पैसा छैन भन्नुहुन्छ, कसरी पढ्नु ? उनले अगाडी भने, अरूले स्कुल ड्रेस लगाएर झोला बोकेर स्कल गएको देख्दा, आफूलाई पनि मन लाग्छ, तर पढ्न पैसा लाग्दो रहेछ, कसरी पढ्ने ?
यस्तै सोही क्षेत्रमा बस्ने ११ वर्षीया लाला मुन्नाको पनि विद्यालय जाने इच्छा रहेछ । ५ भाइ बहिनी रहेका उनका पाँचै जना स्कुल जाँदैनन् । उनी भन्छिन, ४ बहिनी र एक भाइ छौँ, हामी स्कुल जाँदैनौ, दिउँसो बरु बजारतिर फोहोरमा भएका फलाम, प्लास्टिक जम्मा गर्छौ त्यसबाट दुई तीन सय रुपया आउँछ, बा आमा पनि खुसी हुनुहुन्छ, अनि किन स्कुल जानुपर्यो, जे गरे पनि गरेरै खाने हो भन्नु हुन्छ ।
यी त केवल प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्, उनीहरू जस्तै सो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने करिब पचास/साठी जना बालबालिकाको स्थिति यही हो । उनीहरू दिनभरि फोहोरमै खेल्छन्, रमाउँछन्, स्कुल जाने रहर भए पनि जान पाएका छैनन् ।
सरकारको भर्ना अभियानबारे थाहा नै छैन
बुटवल, नेपालगन्ज लगायतका ठाउँबाट आएर काठमाडौँका सडक छेउँमा बसेर ढुङ्गा थिचेर गुजारा चलाउने उनीहरूलाई सरकारको भर्ना अभियानबारे पनि खासै थाँहा रहेनछ । उनीहरू भन्छन्, सरकारी स्कुलमा फ्री पढाई त हुन्छ, भर्नामात्र फ्री भएर हुन्छ ? कापी, कमल, कपडा कसले दिने ? बुटवलकी ४९ वर्षीय पुनम कुश्वारी भन्छिन्, आफूलाई दिनभरि काम गरेर बल्त, तल्ला साँझलाई खाने पक्का हुन्छ, कसरी पढाउँने छोराछोरी ? पढेर पो के गर्छन् ? आखिर लास्टमा हाम्रो जस्तै ढुङ्गा थिच्नै पर्ने हो । किन पढ्नु पर्ने ? कसले पढाउँने? पैसा कसले दिने उनले यस्तै अनेकौँ प्रश्न तेस्र्याइन् । उनीमात्रै होइन उनी जस्तै उक्त क्षेत्रमा बस्ने दर्जनौँ परिवारको कुरा र पीडा उस्तै हो ।
सरकारको भर्ना अभियान कर्मकाण्डीमात्रै
सरकारका प्राय कार्यक्रम कर्मकाण्डी र नारामै सीमित हुन्छन् भन्दा फरक पर्दैन । नीति र नियममा राम्रै देखिने कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन तहमा कमजोर देखिन्छन् । हरेक शैक्षिक सत्रमा जस्तै यो वर्ष पनि विद्यालय भर्ना हुन छुटेका बालबालिकालाई खोजी खोजी विद्यालय भर्ना गराउने सरकारी अभियान देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो । संविधानले नै सबै बालबालिकाले आधारभूत शिक्षा, निःशुल्क र अनिवार्य पाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ र यसलाई मौलिक हकमा पनि समावेश गरिएको छ ।
यो वर्ष ‘हामी सबैका इच्छा, अनिवार्य निःशुल्क आधारभूत शिक्षा’ भन्ने नारा तय गरिएको थियो र भर्ना अभियान सरकारले ‘एक बच्चाको भर्ना मेरो सामाजिक दायित्व, पहुँचको सुनिश्चितता र सिकाइमा स्थायित्व’ भन्ने थियो । यसअनुसार शिक्षाको पहुँचबाट टाढा रहेका विपन्न, गरिब, सीमान्तकृत, लोपोन्मुख वा अन्य पिछडिएका वर्गका बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गरी सहयोग गर्न सरोकारवालालाई अनुरोध गरेको थियो ।
यही अनुरूप प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुगु पुगेर भर्ना अभियानको थालनी गर्दै एक बालकको अभिभावकत्व ग्रहण गरे । त्यस्तै सरकारका मन्त्री, सांसद, स्थानीय जनप्रतिनिधि, मन्त्रालयका कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी लगायत सङ्घ संस्थाका विभिन्न सामाजिक अभियन्ता लगायत सर्व साधारणले पनि विभिन्न बालबालिबाको अभिभावकत्व ग्रहण गरे । सरकारले भर्ना कार्यक्रम धूमधामले सम्पन्न भएको बतायो । तर अझै देशभरका धेरै बालबालिकालाई यो अभियानले छोएन । त्यसैले सरकारको भर्ना अभियान कर्मकाण्डी जस्तोमात्रै भयो ।
गत वर्षको तथ्याङ्क अनुसार आधारभूत तह उमेर समूहका तीन लाख १३ हजार २८९ बालबालिकाले विद्यालयगत कक्षाकोठाको मुख नै देख्न पाएका थिएनन् । देशमा पाँचदेखि नौ वर्ष उमेर समूहका ८८ हजार २०७ बालबालिका विद्यालयमा पाइला टेक्नै पाएका थिएनन् ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठ अर्यालका अनुसार अहिलेसम्म ७ लाख बढी नयाँ विद्यार्थी विद्यालय तहमा भर्ना भएका छन् । उनले भने, यो प्रारम्भिक विवरण हो यकिन तथ्याङ्क शिक्षा विभागले तयार गर्दै छ, केही दिनमा सार्वजनिक होला । गत वर्षको तथ्याङ्कमा विद्यालय बाहिर रहेका ८८ हजार बालबालिकामध्ये ३४ हजार विद्यालय तहमा भर्ना भएको प्रारम्भिक तथ्याङ्क रहेको उनले जानकारी दिए ।
यो तथ्याङकबाट पनि सरकारको भर्ना अभियानले विद्यालय तहभन्दा बाहिर रहेका हजारौँ बालबालिकालाई छुन नसकेको देखिन्छ । यसबाट गत वर्ष विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकामध्ये आधाँ पनि विद्यालय तहमा ल्याउन नसकिएको प्रस्ट देखिन्छ । सरकारले करोडौँ खर्चेर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाएको भर्ना अभियान पनि कर्मकाण्डी मात्रै भएको छ ।
उद्योग मन्त्री मातृका यादव उपचारका लागि थाइल्याण्ड जाँदै
नीति तथा कार्यक्रमबारे छलफल गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै